DASTUURKA CUSUB EE SOOMAALIYA PDF
April 30, 2020 admin Relationship
Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. جمهورية الصومال الفيدرالية. Dastuurka Ku-Meel Gaarka. La Ansixiyey August 1, MrHeishu, Soomaaliya . Muqdisho – Shir saddex maalmood socday oo ku saabsanaa dastuurka cusub ee Soomaaliya ayaa maanta la soo gebagabeeyay iyada oo uu. Sabtidii waxaa la soo xiray kalfadhigii 7-aad ee baarlamaanka federaalka, waxaa la sheegay in la dhameystirayo cutubyada dhiman sida 5, 6.
Author: Arashigul Meztitaxe
Xaqiijisaa in xubnaha laamaha sirdoonka iyo booliska ee galay tacaddiyada qaab ku haboon loo maxkamadeeyo, ayagoo lasoo taagayo maxkamado madani ah; iyo, Qaadaa tallaabooyin la mid ah kuwa mudada kooban iyo mudada dhexe ee looga gol leeyahay in lagu sameeyo kala shaandheyn inta ay socdaan qoridda iyo isku dhafka booliska iyo sirdoonka, si la mid ah tallaabooyinka kor lagu soo xusay ee khuseeya milateriga.
Carruurta askarta ah ee la qabto waa in hubka laga dhiggaa, oo la siiyaa gargaarka ku haboon ee ay u baahan yihiin si ay jir iyo maskax ahaan ugu soo kabtaan ayna bulshada uga mid noqdaan. Qodobka 6aad — Astaanka Qaranka 1. Cutubka 3aad Xuquuqda Aas-aasiga ah. Cutubka 7aad Qaab-Dhismeedka Federaalka ee Jamhuuriyadda.
soomalaiya Waxaa ay shuruudda ku dareen in uu ka dhashay qabiillada dalka degan, weli in uu Afrikaan asal ah yahay.
Mar wax laga waydiiyay Bob Marley oo aamin sanaa diintan, sida uu ugu sharxi karo dadka macnaha Rastafari wuxu yiri “waxan ku oran lahaa dadka, xaqiiqsada oo ogaada in mudane, boqor Slomaaliya Salaasaha Itoobiya uu yahay Ilaaha Weyn, Kitaabka Injiil ayaa sidaas yiri, hadalkana wargeyska Babylon ayaa sidaas yiri, anaga oo ilmihii ah ayaa sidaas niri.
Qabyo-Qoraalka Dastuurka Cusub ee Soomaaliya.
Dhinaca kale, iyadoo doodaas ay ka bilaabatay gudaha Dastuyrka ayaan baaritaan ku sameynay haddii uu jiro dunidan dal ogolaanaya in uu madaxweyne ka noqdo ruux labo dhalasho isku wata, natiijada waxaa ay noqotay in caalamka laga diiday ruux labo baasaboor leh in uu dal hogaamiyo. Burundi opposes AU calls to withdraw troops in Somalia December 24, Somalia edges closer to famine as millions struggle without food December 28, Xukuumadda oo kaashanaysa howlwadaageeda caalamiga ah, wadatashina la yeelanaysa dadka soo barakacay, waa in mudada dhexe ay: Inkastoo Sharciga Federaalka ee Warbaahinta ay ku jiraan qodobo wanaagsan, ayaa haddana xannibaadaha saxaafadda ee sharcigaasi ay yihiin kuwa aan si wanaagsan loo qeexin.
Dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, gaar ahaan NISA iyo ciidanka booliska, ayaa adeegsaday qaabab kala duwan si ay weriyayaasha ugu qasbaan in ay arimaha jira uga warramaan sida ay dowladda rabto. Maxaa tiri, Maay tiri iyo Carabi sida ku cad jadwalka. Inkastoo uu maamulka cusub wajahayo caqabado badan, ayaa haddana waxaa suuragal ah horumar degdeg ah, sida in la xaqiijiyo in xubnaha dastuirka tirsan ciidamada ammaanka ama maleeshiyaadka dowladda taabacsan ee galay tacaddiyada xuquuqda aadanaha laga rusqeeyo ciidamada ama aan lagu darin qaab-dhismeedka cusub ee ammaanka.
Maqaamkma Magaalo madaxdu ay ku leedahay qaabdhismeedka federaalka ee Jamhuuriyadda wuxuu ku xusan yahay Cutubka 7-aad ee Dastuurka. Haseyeeshee dalalkaasi ayaan u hurin waqti, dhaqaale iyo rabitaan siyaasadeed ee loo baahan yahay si loo sameeyo baaritaan lagu kalsoonaan karo.
Xukuumadda iyo baarlamaanka waa in ay:. Sida halkaas ka muuqata Zion waa eray Yuhuudi ah oo ay u yaqaanaan Jurisalaam. Maxamed Nur Gacal oo ka tirsan aqoonyahanka dalka waxaa soomaaliy qabaa in madaxweyne labo dhalasho leh uu khatartiisa leeyahay, isagoo intaa raaciyay in aanay dunida inteeda kale ka jirin, waxaa uu ku taliyay in wax laga bedelo shuruudaha qofka u sharaxan madaxweynaha ee ku qoran dastuurkan qabyo qoraalka ku jira.
Raridaasi ayaa dadka soo barakacay ka dhigtay kuwo ay xaaladdooda noolaleed mugdi sii gashay, isla markaana ammaankooda sii xumaysay, caqabadna kala kulma helitaanka gargaar. Joojinta Askaraynta Carruurta, Ula Dhaqanka Carruurta Lala Xiriirio Ururada Hubaysan Si Waafaqsan Heerarka Caalamiga ah Soomaaliya waa in ay qaadaa dhammaan tallaabooyinka daruuriga ah si ay carruurta uga saarto ciidamadeeda, ayna si wanaagsan ula dhaqanto oo ay u difaacdo carruurta ay adeegsadaan ururka Al-Shabab iyo ururada haybaysan ee dowliga ah ama aan dawliga ahayn.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in uu sare u kacay khasaaraha dadka rayidka ah kasoo gaaray weerarrada ay ka midka yihiin kuwa ciidamada dowladda ee dhacay saddexdii bilood ee ugu dambeeyay Ka caawisaa dadka aan awoodin ama aan rabin in ay ku laabtaan deegaannadooda, sidii ay u degi lahaayeen magaalooyinka waayen oo ay dadka u dhexgeli lahaayeen, ayadoo siinaysa hooy asaasi ah.
Dastuurka cusub oo loo ansixiyay
Tusaale ahaan, horaantiimaamulka Puntland ayaa ogolaaday in koox dhalinyaro ah oo laba gabdhood ku kufsaday degmada Galdogob lagu maxkamadeeyo shareecadda Islaamka. Yaa dhalay waxan ula jeedaa yaa qoray.
Qodobka in laga fiirsado u baahan waa 88aad ee shuruudda doorashada madaxweynaha, laakiin inta aan qodobkaas ka hadlin, u fiirso dastuurka qodobkiisa 8aad faqradiisa 3aad oo u qoran: Sections dastuuurka this page.
Cutubka 13aad – Hay’adaha Dowlad-Goboleedyada. Qodoboka 7aad Dhulka Dowladda 1. Dowladda Soomaaliya, eee ahaan cysub gaashaandhigga iyo caddaalada waa in ay qaadaan tallaabooyinkan mudada dhexe ah. Samaynta Guddi Soomaaliya oo Madax bannaan oo Xuquuqda Aadanaha ah Samaynta guddi qaran oo xuquuqda aadanaha ah, waxqabad leh isla markaana madax bannaan, ayaa waxa uu gacan ka geysan karaa hormarinta iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha ee heer qaran.
Salaad Cali Jeelle oo ah guddoomiyaha xisbiga midnimada iyo dimoqoraadiyadda ayaa aad uga soo horjeestay in dalka uu madaxweyne ka noqdo qof labo baasaboor leh isagoo arrintaas ku tilmaamay mid khiyaamo qaran ah, kana soo horjeeda wadaniyadda iyo Soomaalinimada. Maamulkii hore waxa uu ku guuldaraystay in uu hogaan u yeelo arinta dadka soo barakacay, taasoo dhalisay in la qeexi waayo cidda ay tahay in ay dusha kala socoto, federaalka ama dowladda hoose.
Cutubka 1aad – Baaqa Jamhuuriyadda.
Waxaa loo dooran karaa jagada Madaweynaha JDS. Arrinta ku saabsan shuruudaha qofka noqonaya madaxweynaha Soomaaliya ee dastuuradii hore ku qornaa waxaa ay ahaayeen kuwoo aad u adag, waxaan soo qaadneynaa sida ay u kala horeeyaan: Shirweynihii Dastuurka Qaran, kaasi oo isku keenay in ka badan ergo oo ka kala yimid dhammaan qaybaha bulshada Soomaaliyeed, ayaa billaabaya hannaan dib u eegis ah oo wax ka qaban doona dhowr arrimood oo dastuuri ah oo aan weli xal loo helin, oo ay ka mid yihiin maqaamka mustaqbalka Muqdisho iyo qaybsiga awoodaha iyo kheeyraadka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka.
Dadka aaminsan diintan waxay qabaan in boqorkii Itoobiya Xeyle Salaase uu yahay “Ilaaha kaliya” ee mudan in la caabudo. Haseyeeshee waxaa la dayacay ama dib loo dhigay dib u habayn muhiim ahayd ee lasamayn lahaa, ayadoo la fiirinayay dano siyaasadeed. Marka aan hoos ku faahfaahiyo qofka qoray dastuurka Soomaaliya loo diyaarinayo, halka ay kasoo jeedo, waxa ay aaminsan tahay, iyo diinteeda markaas ayaa qof walba ogaan karaa xaaraanimada dastuurkaan iyo bahdilka Soomaalida lala damacsanaa mudo dheer.
LA CARTA A GARCIA ELBERT HUBBARD PDF
EPOX 8KHA PDF
ITEXT XMLWORKER HTML TO PDF
DYREKTYWA ATEX 137 PDF